Naago siigaysiga ugu fiican iyo faa'iidooyinkooda | Ragga Stylish
Tababar la samee siigaysiga ragga si aad u hagaajiso galmadaada
Had iyo jeer waxaa loo maleynayay in qalabka galmada uu ku habboon yahay dumarka oo keliya. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in fikradda ah in ninku sidoo kale isticmaali karo qalabkan, uu kordhiyay adeegsiga noocyadan. Ka dib markii lagu xiray guriga sababo la xiriira gudbinta fayraska sanadkii la soo dhaafay, rag badan ayaa helay waqti aad u badan si ay ula kulmaan dhinacyo kala duwan oo ku saabsan dhanka galmada. Mid ka mid ah waa isticmaalka siigaysiga ragga. Ragga waxay ku tijaabinayeen nuucyadaan ah waxyaabaha caruurtu ku ciyaarto oo natiijooyin fiican ay ka heleen.
Maqaalkan waxaan ku tusi doonnaa kuwa ugu fiican ragga siigaysiga ah ee laga heli karo barnaamijka takhasuska leh ee Kala-duwan.
1 Siigaysiga ragga
2 Faa'iidooyinka isticmaalka masturbaterka ragga
3 Alaabada Ugu Macaan Galmada
3.1 Qanacsanaanta nooca lab ah
3.2 Ukunta siigaysiga
3.3 Gacmaha waa bilaash
3.4 Midda ugu macquulsan
Tan iyo markii lagu xannibay guriga faafitaanka cudurka awgeed, qalabka galmada ee ragga ayaa la bilaabay in lagu iibiyo qayb aad u badan. Raaxeeyeyaasha Ragga Waxay bilaabeen inay iibiyaan 40% in ka badan sidii hore. Waa wax iska caadi ah in laga fikiro in tooyada noocan ahi aysan adiga kugu habboonayn, maadaama aad u malaynayso inaad ka badan tahay inta kugu filan inaad dareento oo aad ku raaxaysatid sariirta. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ka sokow wax shuqul ah kuma leh ku raaxeysiga siyaabo kala duwan. Mararka qaarkood waxa aan raadineyno waa kicin kale oo naga dhigeysa inaan yeelano dareemo cusub. Tan macnaheedu waxa weeye in adeegsiga alaabada lagu ciyaaro ee galmada ay na hoosayn doonto innaga ragga ahaan markay tahay firfircoonida sariirta.
Waxaa jira ka tag nacaybka iyo aaminsanaanta bulshada si aad ugu raaxaysato galmada. Waxaad bilaabi kartaa inaad isticmaasho toy toy oo u adeegta tijaabinta. Intaa waxaa dheer, way ku habboon tahay in yar la bilaabo, maaddaama fudeydku aad u sii fiicnaan karo oo kaa caawin kara inaad ogaato dareemo cusub.
Faa'iidooyinka isticmaalka masturbaterka ragga
Waana inaadan arki karin qasaarooyinka noocan ah. Isticmaalka toy-ga ayaa ah mid aad u tiro badan oo faa'iido leh. Iyaga ka mid ah waxaan ka heli libido kordhay, qanacsanaanta galmada, iyo orgasms fiican. Waa in maskaxda lagu hayaa in raggu leeyihiin aagag galmo oo aynaan garanayn sababta oo ah ma isticmaalno iyo in marka aan adeegsanno masturboyaasha ragga aan gaarno noocyada raaxada ee aan la garanaynin illaa iyo xilligaas. Waxaad isbarbardhigi kartaa dadka aad u jecel cuntada laakiin maalin walba cuna. Sidan oo kale, waxaad ku ilaalin kartaa heer sare oo raaxo leh wajiga kala duwanaanta dareenka ee ay bixin karaan.
Haddii siigaysiga ragga loo isticmaalo sidii lamaane, faa iidooyinku way tarmaan. Mid ka mid ah sababaha tan ayaa ah in erotic la jecel yahay, waxay ka bixi kartaa nidaamka caadiga ah waxayna hagaajineysaa xiriirka lamaanaha. Waxa ugufiican, waxaad wanaajin kartaa awoodaada sariirta waxaadna ku qaadan kartaa waqti dheer kacsiga. Mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee ragga badani waa taas Si fiican uma xakamayn karaan kicinta oo way ku raaxaystaan ​​sidaa darteed waxay gaadhaan kacsi ka hor wakhtigooda. Alaabada lagu ciyaaro galmada waxaan ku baran karnaa inaan xakameyno awooda sii wadida orgaanku si aad ufiican anagoon ka joogsan raaxeysiga.
Aqoonyahano badan oo ku xeel dheer cilmiga galmada ayaa kugula talinaya isticmaalka qalabka caruurtu ku ciyaaraan si looga hortago biya baxa dhaqsaha ah.
Alaabada Ugu Macaan Galmada
Sidii aan horay u soo sheegnay, Barmaamijka Kaladuwan wuxuu leeyahay tiro badan oo ah alaabada lagu ciyaaro galmada iyo naago siigaysiga ragga taasi waxay ka dhigi kartaa noloshaada galmada inay si weyn u horumariso. Alaabada ay ku ciyaaraan lama jeclaan karo lama ogaan karo haddii aadan maskaxdaada furin oo aadan bilaabin inaad la kulanto farxad siyaabo kale duwan.
Aynu aragno kuwa ugu fiican ee galmada lagu ciyaaro sida ku xusan Kaladuwanaanta:
Qanacsanaanta nooca lab ah
Kuwa ugu wanaagsan Alaabada lagu ciyaaro ee kala duwan waxaan haynaa qaabka labka ee qanacsanaanta. Wax badan ayaa laga sheegay wax soo saarkan oo nooc dumar ah waxayna siisay wax badan in laga hadlo. Hadda waxaan u jeesaneynaa dhigiisa ragga ah. Waxa ugu horreeya ee laga fiirsado nooca kicinta aad raadineyso. Haddii aad tahay qof bilow ah, waxaad haysataa wax otomaatig ah, buug-gacmeed ah, haddii aad u isticmaali doontid lammaane ahaan, iwm. Waxaas oo dhan, noocyada jira waa in si wanaagsan loo aqoonsadaa. Magaciisa oo buuxa waa Qanacsanaanta Ragga Heerkulka gariirka Male Masturbator-ka waxaana lagu qiimeeyaa € 43.80.
Qalabkan waad ku matalayn kartaa galmada afka oo si dhakhso leh ayaa loola jaan qaadi karaa heerkulka jidhka. Waxay sidoo kale leedahay shaqo nuugid aan caadi ahayn, abuur kuleyl, iwm. Tan waxaad si fiican ugu raaxeysan kartaa oo ku gaari kartaa orgasm adigoo ku qanacsan.
Ukuntaan siigaysiga ah waa mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan suuqa. Kaliya waa inaad furtaa ukunta, ka saar qolofta kuna dar xoogaa saliid ah. Nooc kasta oo ka mid ah qaababka ukunta siigaysigu leeyahay wuxuu leeyahay muuqaal ka duwan taas oo ku siin doonta wadar-kicis guud. Kaliya waxay ku kacaysaa € 8, markaa si fiican ayey u qalantaa.
Gacmaha waa bilaash
Dhammaan kuwa jecel galmada afka, waxaa jira toobad u gaar ah oo ay ku ciyaaraan iyaga. Ayaa lagu magacaabay Autoblow 2 Plus XT Size B waxaana lagu qiimeeyaa € 123.30. Waxay si fiican u siman tahay dhammaan dareenka aan qabno inta lagu jiro galmada afka sida ugu macquulsan uguna otomaatiga ah. Waa xasilloon tahay waana la tijaabiyaa in ka badan 500 saacadood oo la isticmaalo. Waxay leedahay nidaam lala socdo oo sameeya kor iyo hoos dhaqdhaqaaqa keligiis. Waxa kale oo ay leedahay saacado gacmo laysku beddeli karo oo leh saddex cabbir oo kala duwan. Baahida noocan ah, waa shey si cadaalad ah u dhameystiran.
Midda ugu macquulsan
Qalab kale oo kuu ogolaanaya inaad ku raaxeysatid batteriyaal la'aan ama fiilooyin waa PDX Mega Bator USB Male Masturbator White Siil. Qiimuhu waa 116 euro waana aalad erotic ah waxay hubisaa dareen macquul ah. Waxay leedahay dhowr nooc oo qaabab sii deyn oo kala duwan ah oo gaaraya 15. Waxaa lagu soo oogi karaa iyadoo la adeegsanayo isku xirnaanta USB-ga waxayna qaadataa waqti aad u yar.
Kuwa raadinaya wax intaa ka badan, qalabkani waa qumman yahay maadaama uu ka shaqeynayo 3 aagagga ugu muhiimsan ee jirka ee xubnaha jirka: xiniinyaha, aagga maskaxda iyo barta P. Waxaa loo yaqaan 'Vibrator O Boy 7 Speeds Black Male P-Point Massager' waana kaliya qiimihiisu yahay 39.30 euro. Waxaa loo isticmaali karaa kaligaa ama lamaane waxayna kufiican tahay in la kiciyo aag kasta oo jirkaaga ka mid ah.
Waxaan rajeynayaa in raggaan masturbater aad si buuxda ugu raaxeysan karto noloshaada galmada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Tababar la samee siigaysiga ragga si aad u hagaajiso galmadaada
Moodooyinka kabaha kabaha ee ragga